पेनाल्टी प्रहारको विज्ञान
Sunday, 01 July 2012 10:38	दयानन्द बज्राचार्य
फुटबल विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो। प्रत्येक चार वर्षमा हुने विश्वकप तथा युरोकप फुटबल विश्वका अर्बौं फुटबलप्रेमी दर्शकले हेर्ने गर्छन्। विश्वकप तथा युरोकपजस्ता प्रतियोगिता संसारभरकै सञ्चार माध्यमको प्रमुख आकर्षणको विषय बन्ने गर्छ। हाल सञ्चालन भइरहेको युरो २०१२ फुटबल प्रतियोगिता पनि देशविदेशका सञ्चार माध्यमको ठूलो आकर्षण बनेको छ। भनिन्छ, विश्वकपभन्दा पनि युरोकपको उपाधि जित्न बढी कठिन छ। कारण युरोकप प्रतियोगितामा युरोपका उत्कृष्ट १६ राष्ट्रिय टिमले भाग लिएका हुन्छन् भने विश्वकपमा फुटबलको क्षेत्रमा कम विकसित देशका टिम पनि सहभागी हुने गर्छन्।
फुटबल खेलको सबैभन्दा रोचक, पूर्वानुमान गर्न नसकिने र सनसनीपूर्ण पक्ष हो पेनाल्टी प्रहार। निर्धारित ९० मिनेट र अतिरिक्त ३० मिनेटको खेल बराबरीमा टुंगिएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी प्रहारबाट गरिन्छ। जसमा प्रत्येक सहभागी टिमले पाँच गोल प्रहार गर्ने अवसर पाउँछ। कैयौँ पटक विश्वकपलगायत् कतिपय महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम निर्णय पेनाल्टी प्रहारबाट भएका छन्। जर्मनीको वायर्न म्युनिख र इङ्ल्यान्डको चेल्सी क्लबबीच सम्पन्न पछिल्लो च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेलको विजेताको निर्णय पनि पेनाल्टी प्रहारबाट भएको थियो। उक्त खेल चेल्सीले जितेको थियोे। पेनाल्टीको एक निर्णायक प्रहारले कुनै खेलाडीलाई आफ्नो राष्ट्रको ठूलो हिरो वा भिलेन बनाउन सक्छ। त्यसैगरी एउटा निर्णायक पेनाल्टी प्रहारले एकातिर जित्ने टिमको राष्ट्र र तिनका समर्थक खुसीले उफ्रिन्छन् भने अर्कातिर हार्ने टिमको राष्ट्र र तिनका समर्थक शोकमा डुब्छन्। त्यति ठूलो संख्यामा विश्वभरका दर्शकमा त्यति ठूलो सनसनी फैलाउन सफल अरू कुनै पनि खेलमा पेनाल्टी प्रहारजस्तो नाटकीय घटना छैन होला।
पेनाल्टी प्रहारका केही रोचक र रहस्यमय पक्ष छन्। पचास मिटरसम्मको दूरीबाट आफ्नासामु पर्खालका रूपमा उभिएका थुप्रै विपक्षी खेलाडीलाई छिचोल्दै गोल गर्न सक्ने त्यही खेलाडीले ११ मिटरको दूरीबाट गोलपोस्टमा एक्लै उभिएको गोलरक्षकविरुद्ध सधैँ गोल गर्न सक्तैन। पेनाल्टी प्रहारमा गोल गर्न असफल खेलाडीमा विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी पनि पर्छन्। यसैगरी विश्वकप तथा युरोकपजस्ता महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा पेनाल्टी प्रहारमा कतिपय राष्ट्रका टिम सवार्धिक सफल हुने गरेका छन् भने केही राष्ट्रको टोली धेरैजसो असफल हुने गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि पेनाल्टी प्रहारमा जर्मनी सबैभन्दा सफल राष्ट्र मानिन्छ। पेनाल्टी प्रहारमा जर्मनीको सफलता दर सबैभन्दा बढी करिब ८२ प्रतिशत पाइन्छ भने इङ्ल्यान्डको सफलता दर सबैभन्दा कम करिब १८ प्रतिशतमात्र छ। वास्तवमा जर्मनी र इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल स्तरमा खासै ठूलो अन्तर छैन। फिफा वरियताक्रममा जर्मनी हाल तेस्रो स्थानमा छ भने इङ्ल्यान्ड छैटौँ स्थानमा। जर्मनी र इङ्ल्यान्डको फुटबल खेलको स्तरबीच यति कम अन्तर भए पनि आखिर पेनाल्टी प्रहारको सफलतामा यति ठूलो अन्तर किन?
पेनाल्टी प्रहार पूर्णरूपले खेलाडीको खेल क्षमतामा भरपर्ने विशुद्ध प्राविधिक विषय भएको भए पेनाल्टी प्रहारमा गोल रोक्न गोलरक्षकलाई असम्भवप्रायः हुने थियो। एउटा अध्ययनअनुसार सामान्यतया पेनाल्टी प्रहारपछि बललाई गोलपोस्टको जाली चुम्न बढीमा ४ सय मिलिसेकेन्ड लाग्छ (दसलाख मिलिसेकेन्ड बराबर एक सेकेन्ड हुन्छ) भने गोलरक्षकलाई गोलपोस्टको कुनै एक कुनामा पुग्न कम्तीमा ७ सय ३० मिलिसेकेन्ड लाग्छ। अर्थात् बल रोक्न गोलरक्षक गोलपोस्टको सही दिशापट्टि प्रहार गरिएको बलको गतिभन्दा झन्डै दोब्बर गतिले हामफाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्यतः सम्भव छैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि किन कैयौँ पेनाल्टी प्रहार गोलमा परिणत हुँदैनन् र कतिपय गोलरक्षक पेनाल्टी प्रहार रोक्न सफल हुन्छन्?
यी र यस्तै विभिन्न प्रकारका रहस्यमय पक्षका कारण पेनाल्टी प्रहार पछिल्लो समय वैज्ञानिकहरूको चासोको विषय बनेको छ र यसबारे केही रोचक निष्कर्ष निस्केको उनीहरूले बताएका छन्। विश्वकप, युरोकप, च्याम्पियन्स लिगजस्ता विश्वका प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगितामा सन् १९८२ देखि २०१० सम्म सम्पन्न खेलमा भएका सबै पेनाल्टी प्रहारको गहन अध्ययन गरेर खेल वैज्ञानिकहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
पेनाल्टी प्रहारमा गोलरक्षकभन्दा बढी पेनाल्टी प्रहार गर्ने खेलाडी बढी मानसिक दबाबमा हुन्छ। गोलरक्षकले गोल रोक्न नसके त्यसलाई सामान्यरूपमा लिइन्छ, तर गोल रोक्न सके त्यसलाई ठूलो सफलताका रूपमा लिइन्छ। उता, पेनाल्टी प्रहार गर्ने खेलाडी गोल गर्न सफल भए त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ भने गोल गर्न नसके त्यसलाई ठूलो असफलता मानिन्छ। तसर्थ पेनाल्टी प्रहारको क्षणमा प्रहार गर्ने खेलाडी र गोलरक्षकको मानसिक अवस्थामा ठूलो अन्तर हुन्छ। त्यसैले वैज्ञानिकका अनुसार पेनाल्टी प्रहारमा खेलाडीको खेल क्षमताले भन्दा पनि मानव मस्तिष्कको जीव विज्ञानले बढी महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ।
वैज्ञानिकका अनुसार सामान्य अवस्थामा गोलरक्षक पेनाल्टी प्रहार रोक्न गोलपोस्टको दायाँ वा बायाँपट्टि फालहाल्ने (डाइभ गर्ने) सम्भावना बराबर हुन्छ। तर आफ्नो टिम पछाडि परेको अवस्थामा गोलरक्षकहरू प्रायः धेरैजसो दायाँपट्टि डाइभ गर्ने गर्छन्। मानव मस्तिष्क सामान्यतया दायाँतिरबाट निर्दिष्ट हुने गरेको हुन्छ। त्यसैले दबाबमा सफलता प्राप्त गर्न दायाँ वा बायाँतर्फ लाग्ने विकल्प हुँदा मानव मस्तिष्कले अनायास प्रायः दायाँ विकल्प रोज्न पुग्छ। यस्तै व्यवहार अन्य प्राणीमा पनि पाइएको वैज्ञानिक बताउँछन्।
त्यसैगरी पेनाल्टी प्रहारको समयमा गोल प्रहार गर्ने खेलाडीको तनावको अवस्थाले पनि निर्णायक भूमिका खेल्ने गर्छ। कोही खेलाडी रेफ्रीले ह्विसल बजाएर पेनाल्टी प्रहार गर्न अनुमति दिनासाथ हतारमा गोल प्रहार गर्छन्। यसलाई वैज्ञानिक ‘हाय्सटनिङ' (हतारिनु) भन्छन्। यसले खेलाडी उच्च तनावमा रहेको संकेत गर्छ र यस्तो अवस्थामा खेलाडी गोल पार्न प्रायः असफल हुने गर्छन्। कोही खेलाडी रेफ्रीले ह्विसल बजाइसके पनि गोल प्रहार गर्न केही बढी समय लिन्छन्। यसले त्यस्ता खेलाडी कम तनावमा भएको संकेत गर्छ र तिनीहरू गोल गर्न प्रायः सफल हुन्छन्।
पेनाल्टी प्रहार गर्नुअघि सेतो चिह्न लगाएको पेनाल्टी स्थानमा ठीक तरिकाले बल राखेपछि कतिपय खेलाडी गोलपोस्टअगाडि पारेर केही पाइला पछि सर्छन् भने कतिपय खेलाडी गोलपोस्टलाई पछाडि पारेर फर्कन्छन् र गोल प्रहार गर्न तयार हुन्छन्। मनोवैज्ञानिकका अनुसार जुन खेलाडी पेनाल्टी प्रहार गर्नुअघि गोलपोस्टको अगाडिबाट केही पाइला पछाडि फर्किन्छन्, त्यस्ता खेलाडीमा गोल गर्ने आत्मविश्वास बढी हुन्छ र ती गोल गर्न बढी सफल हुन्छन्। पेनाल्टी स्थानमा बल राखेपछि प्रहार गर्नुअघि गोलपोस्टलाई हेर्न नचाहेर त्यसलाई पछाडि पारेर केही पाइला फर्केर पेनाल्टी प्रहार गर्ने खेलाडीमा आत्मविश्वास कम भएको मानिन्छ र ती खेलाडी गोल गर्न प्रायः असफल रहन्छन्। पेनाल्टी स्थानमा बल राखेपछि गोलपोस्टतिर नहेरी फर्कने खेलाडीको प्रवृत्तिलाई वैज्ञानिकहरू ‘हाइडिङ' (लुक्नु) भन्छन्।
‘हायसटनिङ' र ‘हाइडिङ' प्रवृत्ति प्रबल हुने खेलाडी प्रायः पेनाल्टी प्रहारमा गोल गर्न असफल हुन्छन्। एक अध्ययनअनुसार ‘हायसटनिङ' र ‘हाइडिङ'को प्रवृत्ति विशेषगरी इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय टिममा उच्च रहेको पाइन्छ। यसैगरी पेनाल्टी प्रहारमा इङ्ल्यान्डका खेलाडीको प्रहार रोक्न विपक्षी टिमका गोलरक्षकहरू गोलपोस्टको ठीक ठाउँपट्टि डाइभ गरेको र गोल रोक्न सफल भएको पाइन्छ। यसबाट इङ्ल्यान्डका खेलाडीले गोल कतापट्टि प्रहार गर्ने हो भन्ने संकेत अनजानमै विपक्षी टिमको गोलरक्षकलाई दिने गरेको बताइन्छ। यिनै विभिन्न कारणले इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल टिम पेनाल्टी प्रहारमा प्रायः कम सफल भएको पाइन्छ। केही दिनअघि सम्पन्न युरो २०१२ को क्वार्टरफाइनलमा पनि इङ्ल्यान्ड पेनाल्टी प्रहारमा इटालीबाट पराजित भएको थियो। केहीगरी गोलरक्षकले पेनाल्टी प्रहार हुनुअघि प्रहारकर्ताको ध्यान तानेर आफूलाई हेर्न लगाउन सफल भए त्यसले गोलरक्षकलाई गोल रोक्न मद्दत पुग्नसक्ने वैज्ञानिकहरूको धारणा छ। पेनाल्टी प्रहारकर्ताले गोल प्रहार गर्नुअघि गोलरक्षकलाई हेरेको अवस्थामा गोलरक्षकको विम्ब केही समयसम्म पेनाल्टी प्रहारकर्ताको मस्तिष्कमा बसेको हुन्छ। फलस्वरूप, पेनाल्टी प्रहारकर्ताको मस्तिष्कले उसलाई प्रायः त्यही स्थानमा बल प्रहार गर्न निर्देशित गर्छ, जहाँ गोलरक्षक उभिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पेनाल्टी प्रहारकर्ताले प्रायः गोलपोस्टबीच भागमा बल प्रहार गर्ने गर्छ र गोलरक्षकलाई गोल रोक्न सजिलो पर्छ।
पेनाल्टी प्रहारमा प्रायः पहिलोपल्ट गोल प्रहार गर्ने टिमले खेल जितेको पाइन्छ। एक अध्ययनअनुसार पहिला पेनाल्टी प्रहार गर्ने टिम ७६.९ प्रतिशत गोल गर्न सफल भएको देखिएको छ भने दोस्रोपटक प्रहार गर्ने टिमले ६८.४ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको पाइन्छ। यसैगरी पेनाल्टी प्रहारको पहिलो गोलको सफलता र असफलताले पनि पेनाल्टीको नतिजालाई प्रभाव पारेको पाइन्छ। पहिलोपल्ट प्रहार गरी पहिलो गोल गर्न सफल टिमले पेनाल्टी प्रहार जित्ने सम्भावना ८२.२ प्रतिशत पाइन्छ।
गोलरक्षकले पेनाल्टी प्रहारमा रोक्न सफल गोलमध्ये ७१.४ प्रतिशत बल ‘लो' (नीचो) बल हुने गरेका छन्। तसर्थ ‘हाइ' (उच्च) बल प्रहार गर्ने प्रहारकर्ता पेनाल्टी प्रहारमा गोल गर्न बढी सफल भएको पाइन्छ। लिभरपुलको जोन मुर्स विश्वविद्यालयका गणितिज्ञहरूका अनुसार सबैभन्दा सफल र उत्कृष्ट पेनाल्टी प्रहारका लागि प्रहारकर्ताले बललाई ९० देखि १ सय ४ किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा बललाई गोलपोस्टको माथिल्लो कुनामा प्रहार गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बढी गतिमा प्रहार गर्दा बल गोलपोस्टबाट बाहिरिने सम्भावना हुन्छ भने कम गतिमा प्रहार गर्दा गोलरक्षकलाई बल रोक्न सजिलो हुन्छ।
वास्तवमा जतिसुकै अनुसन्धान र विश्लेशण गरे पनि पेनाल्टी प्रहारको नतिजाको शतप्रतिशत सही भविष्यवाणी गर्न असम्भव प्रायः छ। नतिजाको अनिश्चितता नै फुटबल खेलको सबैभन्दा सुन्दर र रोचक पक्ष हो। त्यसैले फुटबल खेलको यस पक्षलाई निरन्तरता दिनु नै खेलप्रेमीका लागि श्रेयस्कर हुनेछ।